Ikike iche iche nke iji igwefoto Police Body Worn | Ngwọta OMG
Kpọtụrụ, anatala igwefoto ma ọ bụ ozu ahụ nke ọma n'ọtụtụ obodo, ebe a na-ahụta ha dị ka ihe njikwa na akụrụngwa megide ike ndị uwe ojii. Ndị a bụ obere ngwaọrụ anaghị etinye aka na uwe ndị uwe ojii na ịdị elu ubu, ka ịdekọ nke ọma n'emebighị ihe ọ bụla kwa ụbọchị. Ha nwere ike na-eme fim mgbe niile, na-enwe ike ibugo vidiyo na igwe ojii na-akpaghị aka.
Ebumnuche doro anya n'ihi na ọ na-enye ohere ijide ma omume nke onye nnọchi anya - nke dabara ma ọ bụ na ọ jaghị - na mgbe emere mpụ. Agbanyeghị, ụdị ngwaọrụ a abụghị naanị ihe bara uru maka ndị uwe ojii. Na Eshia, dịka ọmụmaatụ, eji ya maka ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ, ndị na-eche nche, ndị na-ahụ maka osimiri, njikwa ụmụ anụmanụ ma ọ bụ ọbụna na ngalaba agụmakwụkwọ ka na-atụle, na-akwadebe ndị isi na osote ndị isi kamera ahụ na-esote afọ maka ịdebanye aha ha na ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ.
Enwere ike iji kamera ahụ dị ka ihe nchebe. Ọ bụrụ na mmadụ emee ihe iwe, agwara ya na a na-edekọ ya ma ọ bụ na-ahụ igwefoto, ọ na-atụgharị gaa na mgbanwe omume, Ọ bụ nchekwa nchekwa ọzọ. Ọzọkwa, nnyocha na-egosi na ụmụ amaala na-akpa ezi àgwà mgbe edekọtara ha.
Edere vidiyo a site n'ọnọdụ onye ọrụ ahụ wee jide ogo 130. Dika ndi dikwa iche di iche gosiputara na ebe ahu i nwere uzo di iche.
Ikike iche iche nke iji igwefoto Police Body-Worn gbanwere ikpeazụ: December 3rd, 2019 by admin
Nzuzo 3003 3 Echiche Taa